Ny iray ihany dia efitra fandroana kely, maninona ny olona no nametraka fomba sy toetr'andro!
Home / Blog / Ny iray ihany dia efitra fandroana kely, maninona ny olona no nametraka fomba sy toetr'andro!
2021 / 03 / 28 FisokajianaBlog 4949 0
Tarehimarika ho an'ny vokatra fisaka tile IMOLA Italiana
Isika rehetra dia manonofy trano fandroana malalaka, tsara kokoa amin'ny koveta fandroana sy fandroana misaraka, fitoerany roa, ary seza fandraisam-bahiny ahazoana aina aza miala sasatra rehefa milomano ……
Eny, ho an'ny nofinofinay iraisana, omeo fitsipika famolavolana 10 izay afaka mampiasa ampahany na feno ireto torohevitra ireto mba hahatonga ny efitrano fidianao ho avo roa heny.
Iray amin'ireo fomba mora indrindra hisehoan'ny habaka malalaka ny fampiasana fotsy be dia be: taila fotsy, loko rindrina fotsy, kojakoja fotsy, sns. Io loko fotsy io dia mahatonga ny ambin'ny loko hihena voajanahary ary hahatonga ny habakabaka toa lehibe kokoa. Hita taratra amin'ny jiro rehetra fa tsy mandray azy io.
Ny fampiasana ny fotsy dia mandaitra indrindra amin'ny trano fandroana. Satria fotsy ny fandroana, fidiovana ary fidiovana ao amin'ny trano fandroana, ny fampiasana ny fotsy hafa dia mamorona toerana tsy misy fotony, mahatonga ny toerana malalaka sy malalaka.
Aza manahy, ny fampiasana fotsy be dia be dia tsy midika hoe hatsatra sy foana ary tsy manana ny maha izy azy. Amin'ny alàlan'ny fampiasana singa samihafa amin'ny firafitra, toy ny vato miloko maivana na kofehin-dahatsoratra samy hafa, ary ny fidirana an-tsehatra ataon'ny vy na hazo indraindray, dia azonao atao ny mitazona endrika tsy misy dikany na eo aza ny fanehoana ny harenan'ny habaka.
Raha tsy mpankafy fotsy ianao dia mamorona fahatsapana fahalalahana eo amin'ny habakabakao miaraka amina beige mafana, volondavenona malefaka na alokaloka pastel aza (vovoka manga, mavokely, sns.). Misafidiana taila mahavariana sy kanto ary makà loko miloko izay mifanaraka amin'ny rindrina sisa. Ny vokany amin'ny ankapobeny dia milamina sy mafana, nefa tsy miteraka fihenan'ny fahitana sy mampihena ny fahatsapana ny habakao.
Mampiasà endrika mihoapampana
Ao amin'ny efitrano fidiovana misy fipetrahana mirindra, ny mampifandanja ny filàna fitehirizana sy ny fahatsapana toerana malalaka hiainana malalaka dia olana sarotra. Ny famolavolana tafaporitsaka tafahoatra dia vahaolana lehibe. Manome habaka be dia be aminao hitahirizana ireo zavatra ilaina, fa ny fahabangana any ambany dia toy ny fidirana sy fivoahana amin'ny fikorianan'ny rivotra, tsy mamela ny olona hahatsapa ho voageja sy henjana.
Kely kokoa (ny fitsipiky ny minimalism)
Kely no betsaka. Raha tsy mila manana faritra fitehirizana be loatra ianao dia ampiasao milentika antonony raha azo atao, avelao ny faritra malalaka kokoa hisokatra kokoa ny habaka. Raha eo akaikin'ny kovetabe fandroana ny trano fidiovana dia ilaina kokoa ny mamela toerana malalaka hiainana.
Mampiasà fitaratra hampitomboana ny toerana
Ny fitaratra lehibe iray mety hampitombo ny habakao, indrindra eo amin'ny trano fidiovana. Na izany aza, ny fitaratra lehibe toy izany dia tsy maintsy manana kalitao tsara sy marina ny habeny sy ny hateviny, raha tsy izany dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny vokany amin'ny ankapobeny. Ny vokatry ny fitaratra tsara dia ho mahery tokoa ka tsy mila minitra vitsy fotsiny ianao mba hahatonga ny efitrano tsy hisy kilema.
Mampiasà varavarana fitaratra
Fomba iray lehibe hanitarana ny habaka anananao ny fampiasana fitaratra ho toy ny varavarana na mpizara mpantsaka. Ny fanitarana sary dia mahatonga ny habaka ho lehibe kokoa. Indrindra raha resaka fandroana.
Raha manahy ianao amin'ny fisian'ny fiainana manokana dia azonao atao ny mampiasa vera mangatsiaka na miloko, izay mbola mahazaka fampitana hazavana be nefa tsy hahatsapa ho voafetra sy ketraka ao anaty fandroana. Raha tsy mila azy manokana ianao dia asaina mandao ny kovetabe fandroana ianao ary mametaka trano fivarotana izay ampy. Ny koveta fandroana dia handany toerana be dia be ary ny tahan'ny fampiasana dia ambany dia ambany.
Mamolavola ny akany mety
Ny famolavolana akany misokatra amin'ny toerana mety dia tsy mampitombo ny toerana fitehirizana fotsiny, fa manampy koa ny halalin'ny fahitana, mahatonga ny rindrina ho toa malalaka kokoa noho ny tena izy.
Rehefa manamboatra akany ianao dia aza hadino ny mifandray amin'ny matihanina, satria ho be ny fantsona, fantsona sns amin'ny rindrin'ny trano fidiovana.
Ilaina ny jiro tsara mba hahatonga ny toerana rehetra ho lehibe kokoa sy hisokatra kokoa, fa tena ilaina indrindra any amin'ny trano fidiovana izay tsy dia manana jiro voajanahary loatra. Ary koa, mila jiro tsara ao amin'ny trano fidiovana ianao mba hanaratra na hametahana makiazy amin'ny fomba mahomby, noho izany ny maha-zava-dehibe azy dia tsy mila famelabelarana.
Ny fananana drafitra jiro manankarena ao amin'ny trano fandroana no tena ilaina, ary tsara kokoa ny mampiasa loharano maivana amin'ny toerana samihafa. Ny jiro valindrihana (izay afaka mampiasa takamoa marobe), na ny fitaratra fitaratra misy jiro maoderina dia hanampy anao hisoroka ny aloka ary hahatonga ny habaka hahatsapa ho mamirapiratra sy misokatra.
Mamorona tsipika lava
Na mahitsizoro na miendrika endrika hafahafa ny fandroana ao an-tranonao dia misy hatrany ny rindrina na faritra somary lava kokoa noho ny ambiny. Ny manampy talantalana, kofehin-taila, na loko mandoko tsotra aza misy an'ireny faritra ireny dia afaka manampy anao manalalaka ny andalana lava indrindra ao amin'ny efitrano ary manintona ny masonao amin'ny toerana lavitra indrindra, manome ilay toerana malalaka fahatsapana fanitarana.
Mandanjalanja ny refy mitsivalana sy mitsangana
Raha efa lava sy tery ny efitra fandroana anao, miendrika tonelina, aza asongadino ny halavany, dia tsy maintsy mieritreritra bebe kokoa momba ny famelarana ny sakan'ny maso ianao.
Ohatra, ity efitra fandroana tery manaraka ity, ny rindrina sy ny gorodon'ny gorodona dia ampiasaina amin'ny fametahana takelaka marindrano, mampitombo hatrany ny sakan'ny maso, lasa mirindra kokoa ny fifandanjan'ny habaka.
Previous :: Vahaolana fitehirizana mahazatra ao amin'ny efitrano fandroana, habaka hanitarana 3 M²! Next: Inona avy ireo taila fandroana malaza 2021 miaraka amin'ilay programa? Ireto endrika, fitaovana ary loko ireto, miaraka amin'ny taona vitsivitsy dia tsy lany andro!